Waa maxay sababta da'da jireed ee digriiga abuurka baradhada ay muhiim u tahay? - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
в Sayniska, News, Taranka iyo abuur abuurka, Isbeddellada / Isbeddellada, Ecology
Da'da jireed waa fikrad muhiim u ah wax soo saarka baradhada. Waxay go'aaminaysaa marka burooyinku ka soo baxaan iyo inta caleemaha ka soo bixi doonaan. Tani waxay saamaysaa tirada afkoda iyo koritaanka caleen, horumarinta tuber, dhalidda tuber iyo size tuber. Abuurka da'da weyni ma laha hal biqil oo awood badan, laakiin dhowr.
Da'da taariikheed waa tirada maalmood ee laga soo bilaabo abuuritaanka tuber. Da'da jireed waxaa loola jeedaa da'da gudaha ee tuberka maadaama ay saameynayso isbeddellada biochemical.
Sida da'da taariikhiga ah, da'da jireed ayaa isbedeleysa waqti ka dib. Laakin waxa kale oo saameeya hidde-sideyaasha (sida sifooyinka kala duwan) iyo culayska deegaanka.
Fikrado isku mid ah ayaa loo adeegsadaa si loo fahmo gabowga aadanaha. Dadka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo aad uga da' yar -ama ka weyn -inta ay dhab ahaantii yihiin. Genetics ayaa inta badan mas'uul ka ah sida aan da'eyno, laakiin doorashada qaab nololeedka ayaa sidoo kale noqon karta muhiim.
Dhirtu way neefsato si ay u sii deyso tamarta ay u baahan yihiin si ay unugyadoodu u shaqeeyaan – istaarijka iyo sokorta ayaa la cunaa si ay tamar u soo saaraan.
Marka dhirtu ay ku jirto cadaadis, waxay sii neefsadaan. Xaalad kasta oo kordhisa heerka neefsiga waxay dardargelisaa habka gabowga ee digriiga (heerkulka aad u daran, qoyaan la'aanta, nafaqo la'aanta, cayayaanka cayayaanka iyo dhaawaca farsamada inta lagu jiro goosashada). Cadaadiska dhaca wakhti kasta oo nolosha tuber ah ayaa soo dedejin kara gabowga; laakiin cilmi-baarisyo badan ayaa muujiyay in xaaladaha sii kordhaya ay saameyn yar ku leeyihiin da'da jireed marka loo eego xaaladaha goosashada ka dib.
Jir ahaan, tuber yar ayaa lagu gartaa joogitaanka mid ka mid ah burooyinkeeda ugu weyn, kaas oo xakameynaya biqilka kale ee tuberka.
Dhacdadan dhirta waxaa lagu magacaabaa apical dominance, oo ah la qabsiga kor u koritaankooda halkii laamo. Digriiga baradhada, natiijadu waa geed leh afkoda yar iyo digriiga yar laakiin ka weyn.
Digriiga shinnida duugga ah waxaa lagu gartaa luminta awoodda apical. Waxay bixiyaan biqil dhowr ah oo hore u soo baxay. Tani waxay ka dhigan tahay laamo badan iyo digriiga badan, laakiin xajmiga digriiga ayaa ka yar.
Digriiga da'da weyni waxay u muuqdaan inay soo saaraan caleen yar waxayna gaadhaan bislaan goor ka horeysa digriiga yaryar.
Beeridda miraha da'da weyn waxay aad waxtar ugu yeelan kartaa noocyada sii kordhaya ee u janjeera inay soo saaraan digriiga weyn, sida 'Yukon Gold' ama 'Shepody'.
Abuurka yaryar ayaa si tartiib tartiib ah u baxa, laakiin waxay soo saaraan geed ka xoog badan oo leh muddo barar tuber ah oo ka dib koray.
Laakiin beeralayda waxay u baahan yihiin inay isha dhow ku hayaan goosashada ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka oo ay ka saaraan xajinta wakhtiga si loo xaddido wax soo saarka digriiga weyn.
Ku darida bacriminta nitrogen waxay qayb ahaan ka takhalusi kartaa saameynta gabowga waxayna dib u dhigi kartaa bilawgeeda. Nitrojiinka ayaa kaa caawin kara in la jaanqaado sifooyinka tubers da'da yar sababtoo ah waxay saameyn xooggan ku leedahay hormoonnada dhirta kuwaas oo nidaamiya habka gabowga. Laakin wali waxaa jirta khatarta miyir-beelka hore haddii dalagga la cidhiidhiyo ama heerarka nitrogen la yareeyo goor hore.
Haddii iniinahaagu ay yihiin kuwo jir ahaan da'yar oo aad ka welwelsan tahay in tirada cawsku aad u hoosayso, waxaad kor u qaadi kartaa heerkulka kaydinta si ay da'da u da'do miraha ama dib u dhigto beeritaanka.
Haddii iniinahaagu ay jir ahaan da' yihiin oo ay soo saari doonaan laamo aad u badan, waa inaad ilaalisaa xaaladaha kaydinta ku habboon si aad u yarayso gabowga oo aad u beerto abuur isla marka xaaladaha garoonku oggolaadaan.
Beeralayda qaar ayaa ka warbixiya hoos u dhigista asliga ah ee guusha leh ee Rejuvenate (Amvac), daawaynta abuurka oo ka kooban hormoonka dhirta synthetic si ay u caawiso soo celinta awoodda apical. Natiijadu waxay ku kala duwanaan kartaa noocyo kala duwan iyo xaalado kale.
Habka ugu macquulsan ee lagu qiimeeyo da'da jireed ee digriiga abuurka ee kaydinta waa in la ururiyo muunad oo la ilaaliyo dhaqdhaqaaqa biqilka ka dib kuleylka.
Muunadu waa inay ahaataa mid weyn oo muujinaysa kala duwanaanshiyaha gudaha abuur fara badan.
Dhowr toddobaad ka hor taariikhda beeritaanka la filayo, goo goo digriiga abuurka qaybo (haddii aad beeranayso miraha la jarjaray) ka dibna ku rid bacaha mesh ama ku beero ciidda. U fiirso sida ugu dhakhsaha badan ee ay u biqlaadaan iyo inta sprouts samaysmaan.
Laga soo bilaabo: News baradhada
Tags: digriiga yaryarbiqilka digriigadigriiga jirphysiology tuber
Saynis yahan u dhashay gobolka Leningrad ayaa soo saaray 17 nooc oo baradho ah
Smart Logistics waa shirkadda kaliya ee Joorjiyaanka ee qudaarta ka keenta McDonald's